Ogaden News Agency (ONA) – Junedin Sado oo ka soo baxsaday Itobiya soona galay dalka Kenya
Junedin Sado oo ka soo baxsaday Itobiya soona galay dalka Kenya
Waxaa la xaqiijiyay inuu Mr. Junadin Sado, oo ahaa nin meela kala duwan masuuliyad ka soo qabtay uu soo galay dalka Kenya, magangalyo siyasadeedna weydiistay. Warkan oo 2dii maalmood ee la soo dhaafay la’isla dhexmarayay ayaa hadda waxaa shaaciyay wargayska u xagliya dawladda Itobiya ee Ethiochanel.
Mr. Junedin oo afadiisii dhowr bilood ka hor la xidhay iyadoo lagu eedeeyay inay lacag ka soo qaado safaaradda Sacuudiga oy u qaybiso dadka Muslimiinta ah ee ku banaabaxaya Adisababa. Eedeynta loo soo jeediyay afadiisa ayuu aad uga dagaalamay Mr. Junedin oo waqtigaa ahaa Wasiirka Shaqaalaha. Wuxuuna maqaal uu ku difaacayo ku qoray wargaysyada isagoo eedeynaya Xeer-ilaaliyaha ku soo oogay dacwada afadiisa Mrs. Habiba Maxamad.
Wuxuu ogaaday Mr. Junedin in laga xanyuubin doono xasaanada baarlamaanka taasoo loogu gogol xaadhayo in la qabto, sidaa daraadeed ayuu ugu soo baxsaday dhanka Kenya. Ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay labada dawladood ma jiro, inkastoo la xaiijiyay inuu wasiirka soo baxsaday yimid dalka Kenya.
Waxaa la’isweydiinayaa inuu noqon doono Mr. Junedin sidii Dr. Axmad Sheekh oo intuu is-qariyo siduu u aamusan yahay lasoo cadha celin doono iyo inuu ka mid noqon doono mucaaradka Oromada ee u halgamaya xuquuqda shacabkiisa ugu tirada badan qawmiyadaha ku jira xayndaabka Itobiya hasa ahaatee aan xuquuqda ku haysanin.
Is-bahaysiga EPRDF oo ka kooban afar qawmiyadood ayaa hadda u kala safan laba kooxood oo meel xun ay ka mareysaa arinta, waxayna dad xog-ogaal u ah arimaha hoose ee EPRDF-ta ay sheegayaan inay adagtahay in la’isu soo dhaweeyo aragtiyaha kala duwan ee labada garab. Shirka ay isugu iman doonaan xubnaha EPRDF ayaa la saadaalinayaa inuu noqon doono midkii ugu dambeeyay ee ururkaasi uu si wadajir ah u yeesho iyadoo ay soo baxayaan ifafaalooyin muujinaya inay xisbiyo u kala qaybsami doonaan.